Uyisebenzisa njani imigqomo yokurisayikilisha ngokufanelekileyo. Funda ukuba yeyiphi oyisebenzisayo. | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UDaniel Palomino | | Ukusetyenziswa kwakhona
Ngalo lonke ixesha bebona ngaphezulu izikhongozeli zokurisayikilisha ezantsi kwesitalato ukusukela oko abantu ngokuthe ngcembe besazi kwaye beqala Phinda usetyenziswe, nangona kokona kuhlala kutsha kuhlala kukho amathandabuzo afanayo.
Kweli nqaku siza kuchaza malunga nokurisayikilisha, imigaqo ye-5R, izikhongozeli zokurisayikilisha kunye nezinto ezinokurisayikilishwa nganye nganye kwaye yintoni engenjalo, ukongeza kwizikhongozeli zokurisayikilisha ekhaya, yeyona ngxaki iphambili ukuqala ukuphinda usebenzise indawo ekhaya.
2 Imithetho ye-5R
3 Ukurisayikilisha izikhongozeli
3.1 Ikhonkco elityheli
3.2 Isikhongozeli esiluhlaza
3.3 Isikhongozeli esiluhlaza
4 Ukurisayikilisha imigqomo ekhaya
Ukurisayikilisha yinkqubo ejolise kuyo Guqula inkunkuma ibe yimveliso entsha okanye kwimeko yokusetyenziswa kwayo okulandelayo.
Ngale nkqubo isetyenziswe ngokupheleleyo, into esiyithintelayo kukusetyenziswa gwenxa kwezixhobo ezinokubakho, sinako nciphisa ukusetyenziswa kwezinto ezintsha ekrwada kwaye kunjalo ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ekudalweni kwayo. Ngaphandle koko, nayo sinciphisa ukungcoliseka komoya namanzi (ngokutshisa kunye nokugcwaliswa komhlaba ngokulandelelana), kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi yendlu eluhlaza.
Kubalulekile ukuba uphinde uphinde usetyenzise ukusukela izinto ezinokuphinda zisetyenziswe zinakho uninzi lwezinto ezifana nezi: izinto ze-elektroniki, iinkuni, amalaphu kunye namalaphu, isinyithi kunye nezinyithi ezingenazintsimbi, kunye nezinto ezidumileyo ezinje ngephepha kunye nekhadibhodi, iglasi kunye neeplastikhi.
Ukurisayikilisha kwakhona yinto ephambili ekunciphiseni inkunkuma (enye yeengxaki zokusingqongileyo esijongene nazo ngoku) kwaye licandelo lesihlanu lee-3R, eminye yemithetho esisiseko enenjongo yokufumana uluntu oluzinzileyo.
Ukunciphisa: Zizenzo ezenziwayo ukunciphisa ukuveliswa kwezinto ezinokuba yinkcitho, ngamanyathelo okuthenga afanelekileyo, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweemveliso okanye ukuthengwa kwemveliso ezinzileyo.
Ngumkhwa wokuqala ekufuneka siwubandakanye kumakhaya ethu kuba siza kuba nokonga okubalulekileyo "epokothweni" kunye nendawo kunye nezinto zokuphinda zisetyenziswe.
Ukulungiswa: Kukho izinto ezingapheliyo ezinokuchaphazeleka kule R. Ukuphelelwa lixesha kucwangcisiwe yinto echaseneyo kwaye yinto ekufuneka ulwe nayo.
Yonke into inesisombululo esilula kwaye okokuqala kufuneka sizame ukulungisa nayiphi na imveliso, nokuba yifenitshala, impahla, izixhobo zombane, njl.
Phinda usebenzise: Zizenzo ezivumela ukusetyenziswa kwakhona kwemveliso ethile ukuyinika ubomi besibini, ngokufanayo okanye ukusetyenziswa okwahlukileyo.
Oko kukuthi, amanyathelo ajolise ekulungiseni iimveliso kunye nokwandisa ubomi babo obuluncedo.
Fumana kwakhona: Singafumana ezinye izinto kwinto yenkunkuma size sizihlukanise ukuze sizisebenzise kwakhona, umzekelo oqheleke ngakumbi uqhele ukuba ngowesinyithi onokwahlulwa kwizixhobo ezohlukeneyo esizilahlayo nezinokusetyenziswa kwakhona.
Phinda usebenzise: Sele siyibonile, yinkqubo eqokelelweyo yenkunkuma kunye nemisebenzi yonyango ebavumela ukuba baphinde benziwe kumjikelo wobomi.
Ukwahlulwa kwenkunkuma emthonjeni kusetyenziswa ukubonelela ngeendlela ezifanelekileyo.
Emva kokuba sithethile konke oku, siya kwimigqomo yokurisayikilisha, njengoko uyazi, ezona ziphambili zi-3 mthubi, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza.
Kubona bantu batsha kule ndawo kunye nakweyona gqala inkulu kodwa nangoku kungathandabuzeki, zihlala zenziwa amatyeli ambalwa (ngonyaka) amaphulo okufundisa ngendalo esingqongileyo okanye iinkqubo zokusebenzisa inkunkuma nohlaziyo, ngenjongo yokwazisa nokwazisa ngempembelelo yokusingqongileyo yokuveliswa kwenkunkuma, kunye neendlela zokuxhasa indalo esingqongileyo ukunciphisa oku.
La maphulo okanye iinkqubo zihlala zenziwa yi IJunta de Andalucía, i-Andalusian Federation yoomasipala kunye namaPhondo (i-FAMP), i-Ecoembes kunye ne-Ecovidrio Kwaye kulungile ukuba abantu bafunde ukuphinda basebenzise, ​​kuba baninzi abantu namhlanje abangakwaziyo ngokupheleleyo ukwenza ntsha kwakhona.
Ezi sayithi zinika ulwazi neengcebiso malunga nendlela yokurisayikilisha ngendlela ebalaseleyo kwaye oko kukuthi, ukuqala ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, kuya kufuneka sazi ukuba yintoni inkunkuma yasekhaya: ezo ziveliswa emakhayeni ngenxa yezenzo zasekhaya.
Ezona zixhaphakileyo zizintsalela zezinto eziphilayo, iplastiki, isinyithi, iphepha, ikhadibhodi okanye izikhongozeli zeglasi kunye neebhokisi. Kwaye, njengoko ubona, phantse yonke into inokuphinda yenziwe.
Ngokwazisa okuncinci endikunikileyo, ngoku ndiya apho kubaluleke kakhulu: indlela yokwahlulahlula inkunkuma esiyivelisayo, kwaye oku Ukwahlula okukhethiweyo equka ukuhlanganisa inkunkuma kwizikhongozeli ezahlukeneyo ngokweempawu neempawu zazo.
Apha ngezantsi kukho zonke izikhongozeli kunye nenkunkuma ethile evela kwisikhongozeli ngasinye:
Isikhongozelo sendalo kunye nokuhlala: izinto eziphilayo kunye nokulahla kwezinye izikhongozeli.
Isikhongozeli esimthubi: izikhongozeli ezikhanyayo zeplastiki, iibhokisi, iinkonkxa, iierosols, njl.
Isikhongozeli esiluhlaza: izikhongozeli zekhadibhodi nezamaphepha, amaphephandaba neemagazini.
Isikhongozeli esiluhlaza: iibhotile zeglasi, iingqayi, iingqayi kunye neejagi.
Isikhongozeli seoyile: ioyile yemvelaphi yasekhaya.
Indawo yeSigre: amayeza kunye nokupakishwa kwazo. Zifumaneka ezikhemesti.
Isikhongozelo sebhetri: iqhosha kunye neebhetri zealkali. Zifumaneka kwiivenkile ezininzi nakwizibonelelo zikamasipala.
Isikhongozelo sempahla: iimpahla, amadlavu nezihlangu. Imibutho emininzi ineenkonkxa kunye neenkonzo zokuqokelela.
Ikhonteyina yelampu: i-fluorescent, ukonga umbane iibhalbhu zokukhanya kunye nee-LED.
Esinye isikhongozelo senkunkuma: buza ibhunga ledolophu yakho ukuba bakho phi.
Indawo ecocekileyo: inkunkuma enkulu efana noomatrasi, iimpahla zasekhaya, njl. Njl., Intsalela yepeyinti, izixhobo zombane kunye nenkunkuma eyingozi emakhaya.
Nangona kunjalo, ezona zisetyenziswa kakhulu zizikhongozeli eziqhelekileyo (izinto eziphilayo), tyheli, luhlaza, noblowu kuba yinkcitho esiyivelisa kakhulu.
Sisebenzisa nganye ngaphezulu kwe Iziqulatho ezingama-2.500 ngonyaka, ingaphezulu kwesiqingatha seplastiki.
Okwangoku eAndalusia (kwaye ndithetha ngeAndalusia okoko ndivela apha kwaye ndiyazi idatha ngcono) ngaphezulu kwe-50% yezikhongozeli zeplastiki ziphinda zisetyenziswe, phantse i-56% yesinyithi kunye ne-82% yeebhokisi. Akukubi konke konke!
Ngoku jonga umjikelo weplastiki kunye negrafu encinci ebonisa, apho ungabona khona usetyenziso lokuqala kunye nokusetyenziswa emva kokurisayikilisha.
Ukuphelisa esi sikhongozeli, kufuneka sitsho ukuba inkunkuma leyo Hayi yiya kwesi sikhongozelo zezi: iphepha, ikhadibhodi okanye izikhongozeli zeglasi, iemele zeplastiki, iithoyi okanye iihanger, iiCD kunye nezixhobo zasendlini.
IngcebisoCoca izikhongozeli uze uzicofe ukuze unciphise umthamo wazo ngaphambi kokuziphosa kwisitya.
Ngaphambili sikubonile okufakwe kwizikhongozeli, kodwa hayi Hayi Kufuneka ibekwe kuzo kwaye kule meko yile: I-diapers ezimdaka, i-napkins okanye izicubu, ikhadibhodi okanye iphepha eligcotshwe igrisi okanye ioyile, ifoyile yealuminium kunye neebhokisi, kunye neebhokisi zamayeza.
Jonga umjikelo wephepha kunye nenyani eyonwabisayo.
Ingcebiso: Songa iibhokisi ngaphambi kokuzifaka kwisitya. Musa ukushiya iibhokisi ngaphandle kwesikhongozeli.
Intoni Hayi kufuneka ifakwe kule khonteyina zezi: iiglasi kunye neiglasi ezenziwe ngeglasi, i-ceramic, i-porcelain kunye nezipili, iibhalbhu zokukhanya okanye izibane zefluorescent.
Ingcebiso: Susa iziciko kwizikhongozeli zeglasi ngaphambi kokuba uzise kwisikhongozeli njengoko sonakalisa inkqubo yokurisayikilisha
Yanganye Iibhotile zeglasi ezingama-3000 ilitha ephinda isetyenziswe inokugcina:
I-1000 kg yenkunkuma engayi kwindawo yokulahla inkunkuma.
I-1240 kg yezinto ezingafunekiyo ukuba zingakhutshwa kwindalo.
Ukulingana ne-130 kg yamafutha.
Ukunciphisa ungcoliseko lomoya ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 ngokwenza ukupakishwa okutsha kwiglasi erisayikilishiweyo.
Ukuba siyaphuma kwezi zikhongozeli siye kwezona zisetyenzisiweyo kuzo zonke, zezinto eziphilayo, singanciphisa kwaye sisebenzise ngcono oku kuba nezinto eziphilayo zinokuguqulwa zibe ngumgquba, ezinokusetyenziswa njengomgquba.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngomgquba ungandwendwela inqaku lam kwibhlog yam «INkomfa malunga nokurisayikilisha nokufaka isichumisi kunye noMasifundisane malunga nendlela yokwenza inkunkuma» apho uzakufunda ukubaluleka komgquba kunye nendlela yokwenza ekhaya ukongeza ekwakheni umgqomo womgquba.
Ukurisayikilisha imigqomo ekhaya
Eyona ngxaki banayo abantu abaninzi ayikokungazi ukuphinda kusetyenziswe kwakhona okanye ukuphinda kusetyenziswe kakubi kodwa "ubuvila" obuza ngokuya kwizikhongozeli okanye ngokwenza ukwahlukana ekhaya, nokuba kungenxa space okanye enye imeko.
Ukuba ungomnye wabo baswele indawo, ungasoloko ukwazi ukubuyisela izinto ngendlela efanelekileyo, kwi-Intanethi unokufumana iingcinga ezininzi okanye iingcebiso zokuziqhelanisa nekhaya lakho, ziyinyani ukuba zihlala ngaphezulu okanye zibiza imali kodwa uhlala uhlala ugqiba ekugqibeleni.
Njengoko benditshilo, babiza imali njengale migqomo yokurisayikilisha ekhaya. Yeyona nto intle kakhulu xa kufikwa emsebenzini, uyithenge ngokulula kwaye uyisebenzise ekhaya.
Ezinye zicace ngakumbi kodwa zitshiphu njengale ndiza kukubonisa apha ngezantsi.
Ngeebhakethi ezindala okanye iibhokisi zekhadibhodi ungazenzela imigqomo yokurisayikilisha njengoko ndenze umzekelo ehlotyeni kwizikolo zasehlotyeni endikhe ndasebenza kuzo.
Ekugqibeleni abantwana bafunda ixabiso lokurisayikilisha kwaye nangakumbi ezinye ii-R kuba sisebenzisa kwakhona izinto ukuzinika enye into kwaye sinciphise ukusetyenziswa kwayo.
Njengoko ubona zininzi izisombululo, nje kufuneka ufumane eyona ilungele wena.
Ukuba ngethuba ufana nam, akukho sithuba sinqongopheleyo, oku kulula ngokulula njengokubeka ibhegi enkulu ngaphezulu kumatshini wokuhlamba kwaye uphonsa yonke into eza kuphinda isetyenziswe kwakhona kwaye xa izele yiya kwizikhongozeli uyihlule phaya ngokufanayo.
Ndiyazi ukuba kuyakhawuleza kwaye kulula ngakumbi ukuya kwindawo yokuphinda isetyenziswe kwakhona kwaye ulahle yonke into kuba sele yahlulekile kodwa nganye inento enayo kwaye into ebalulekileyo ekugqibeleni kukuba uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde usebenzise.
Ndiyathemba ukuba ikukhonze kwaye uyanciphisa, uphinde uphinde uphinde uphinde wenze ubomi obungcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Ukurisayikilisha imigqomo, imibala kunye neentsingiselo